‘लाल पुर्जा’ का यी कलाकार को-को हुन् चिन्नुहुन्छ ? « Ramailo छ
‘लाल पुर्जा’ का यी कलाकार को-को हुन् चिन्नुहुन्छ ?
आउँदो माघ ४ गते रिलिज हुने फिल्म लालपूर्जा केही तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक तस्बिरमा अभिनेता सौगात मल्ल, विपिन कार्की र कामेश्वर चौरसियालाई चिन्न हम्मे हम्मे पर्दछ । हेर्नुस् केही नचिन्ने तस्बिरहरु :
निगम श्रेष्ठ निर्देशित ‘लाल पुर्जा’ मा निर्माता समेत रहेका विक्रमसिंह थारु, नव नायिका मिरुना मगर, हरिहर शर्मा, मेनुका प्रधान, कमलमणी नेपाल, मिश्रि थापा र अनिल पाण्डेको अभिनय छ । विक्रमले उमेश श्रेष्ठसँग मिलेर संयुक्त रुपमा फिल्म निर्माण गरेका हुन् ।
१ करोड २० लाख लगानी दाबी गरिएको फिल्म ‘लाल पुर्जा’को सबै छायाँकन लमजुंगमा गरिएको छ । आगामी साता फिल्मका ट्रेलर लन्च हुँदैछ ।